ဗီဒီယိုက ချက်တင် နော်ဝေ
ငါလူငယ်တစ်ဦးချွန်၊မူပိုင်ခွင့်နှင့်အတော်လေးအားကစားအမျိုးသမီးငယ်သူလိုသုံးဖြုန်းဖို့တစ်စိတ်လှုပ်ရှားစရာနှင့်ပျော်စရာအချိန်ဒီစနေနေ့မွန်းလွဲပိုင်း။ ကစားရန်ငါကြိုက်နှင့်ဆွေးနွေးရန်အကြောင်းလူသစ်၊မိမိတို့အလိုဆန္ဒများနှင့်စိတ်ကူးယဉ်။ ဒါကြောင့်၊သင်စိတ်ဝင်စားလျှင်၊ကျေးဇူးပြုအကြှနျုပျကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်လျင်မြန်စွာ၊ကြောင်းမမေ့မလြော့သင့်ရဲ့စိတ်ကူးယဉ်နှင့်နှစ်သစ်ကူး! ချိုမြိန်၊သဘောနှင့်ဇနီး(အင်္ကျီ၊အတွင်းခံ၊လိင်၊အိတ္၊ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်)တန်း၊ဒါပေမယ့်မစကား၊လိုချင်တပ်နှင့်တွေ့ဆုံရန်လူသားတစ်ဦးအမှတ်တရ၊အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏မည်သည့်အသက်အရွယ်သို့မဟုတ်စုံတွဲတစ်တွဲ၊ ပျော်စရာရှိသည်နှင့်လေးစားအသီးအသီးအခြား။ တုံ့ပြန်သည့်ဖွယ်နည်းလမ်း၊နှင့်မက်ဆေ့ခ်ျကိုနှင့်အတူဓာတ်ပုံအမြန်ဆက်သွယ်ပါ။ အလွန်ကြီးစွာသောအလိုဆန္ဒများအတွက်ကယ်ဆယ်ရေး? ငါအချိန်အဘို့အယောက်ျားတွေနှင့်အတူအပြည့်အဝဘောလုံးည။ ေသင့်ရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုနှင့်အတူသင့်ရဲ့ဓါတ်ပုံနှင့်သင်၏ဆန္ဒကိုပထမဦးဆုံးအပြောင်းအရေအတွက်နှင့်ကြည့်လျှင်ပထမအသွယ်သည်ကျေနပ်လူငယ်အမျိုးသမီးကျား၊စေသဘောနှင့်အလွန်ထွင်၊ငါရှာဖွေနေများအတွက်လူသစ်ဖြစ်ဖို့နွေးနှင့်အတူရင်းနှီးယောက်ျားမိန်းမ၊လူပျို၊လိုအပ်ချက်အဖြစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေး။ ငါတုံ့ပြန်ကနေတဆင့်ဆိုက်၊ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုအလွန်ကြိုဆိုပါတယ်။ နမ်း! ငါလူငယ်တစ်ဦးအမျိုးသမီးတစ်ယောက်အကြိုက်နှင့်အတူကစားရန် ၊ငါရှာချင်တယ်တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုအနေနဲ့င့္ခဲ့ပါတယ္။ လာချင်မှငါ့အိမ်၊ငါ့ကိုနမ်းပါ၊သို့မဟုတ်ငါ့ကိုကူညီမွေ့လျော်ငါ့ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ? အကယ္ခံစားဖြတ်သန်း၊နှင့်အကြှနျုပျတို့သညျအလွန်ပါဝင်ပတ်သက်နှင့်အတူအသီးအသီးအခြား၊ကျွန်တော်လက်ခံရမ္မက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်)။ ငါအဘို့စောင့်ဆိုင်းနေသင့်ရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုပေးပို့ဖို့ဓါတ်ပုံများ၏တစ်ဦးခွေးဇကြိုးစားဖြည့်ဆည်းဖို့သူမ၏စိတ်ကူးယဉ်ဘာင္ကြက္ထိုအခါ၊ လူယောက်ျားသို့မဟုတ်မိန်းမအကြှနျုပျကိုဆကျသှယျနိုငျသင်ချင်တယ်ဆိုရင်ကလေးငယ်တစ်ဦးအတွက်အိပ်ရာထဲမှာဒါမှမဟုတ်အတန်ငယ်ထူးဆန်းနေရာ၊အဘယ်ကြောင့်မကြိုးစား? သူမ၏များပေးပို့ခြင်းငါ့ကိုအသတင်းစကားနှင့်အတူသင့်ရဲ့အကြံပြုချက်များ! အနမ်းငါရှာနေတာပါဘယ်သူသည်ယောက်ျားတစ်ယောက်အတွက်ဖြစ်စေတော်မူမည်ငါ့ကိုအမွှေးအင့်၊ငါသည်လည်းဖို့ပွင့်လင်းလိင်ချိန်းတွေ့(ကုန်စည်ပြပွဲ)ကျွန်မဟာအစေ့သင့္ေတာ္ေသာနဲ့ကျွန်မစိတ်ကူးယဉ်အတွက်ပျော်မွေ့၏တစ်စိမ်းသို့မဟုတ်စိမ်း။ မွမွ်ေဝမည္ဂျေပြီးအဘို့အစောင့်ဆိုင်း”တွန့်ဆုတ်ကြဘူး”။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်:)အမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုရှာဖွေနေသည်လူနှင့်အတူတစ်ခုသို့မဟုတ်မပါဘဲယန်းအငယ်တို့ကိုသူမ၏ကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်။ ဖို့အခမဲ့ခံစားရငါ့ကိုသင့်ရဲ့အဖြေများအတွက်အမြန်ဆက်သွယ်ပါ။ ဆာ:ကိုယ့်လှပတဲ့ရယ်နှင့်ဖစ္လာပူ။ ကြာ
ဓါန္မွလွိဳက္လွဲစြာၾကိဳထိပ်တန်းကြောင်ဆိုဒ်များတစ်နေရာတည်းမှာဆိုင်မှာများအတွက်အကောင်းဆုံးချက်တင်ဆိုဒ်များ၊ကင္မရာကိုကင္မရာလိုပဲ ကျနော်တို့ကပှအင်တာနက်ရှာတွေ့မှလူကြိုက်အများဆုံးကျပန်းစကားပြော၊နှင့်များအတူတကွလာကြပြီတစ်နေရာတည်း၌သင်တို့အဘို့အ။ အားလုံးနှင့်အတူအသစ်အများအတွက်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ၊ကမ္ဘာတဝှမ်းကလူအဘို့ရှာကြသည်အသစ်အစားထိုးဖို့ ကို၊မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်တွေ့ဆုံရန်သို့မဟုတ်ရုံနှင့်အတူပျော်ရွှင်စရာများကျပန်းတကျွန်းတနိုင်ငံသား။ အဲဒီအစား၊ကျွန်မတို့ရွေးချယ်ချက်တင်ပ်များနှင့်အကြောင်းပိုပြီးအမျိုးသမီးများ၊အများအားဖြင့်အမျိုးသားများအတွက်၊နှင့်အနည်းဥပဒေများ၊နည်းလှိုင်းဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်တားမြစ်ချက်အဘို့အဘယ်သူမျှမအကြောင်းပြချက်မှာအားလုံး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်းကမ်းလှမ်းအကောင်းဆုံးကျပန်းချက်တင်ဆိုက်များနှင့်အလွန်ကြီးစွာသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့သူစိမ်းဘဲတစျခုခန့်မှန်းထားတဲ့အများဆုံးရေပန်းစားသည်။ ဒါကြောင့်အချိန်ဖြုန်းဖို့ကြိုးစားနေအတွက်အဖြေကိုရှာတွေ့။ ဆိုက်သုံးစွဲဖို့၊ကိုယ့်တယောက်အပေါ်ကိုနှိပ်အအိုင္ကြန္မ်ားညာဘက်အပေါ်ခွင့်ပြု၏တည်းဖြတ်မည်ဖြစ်ကျပန်းချိတ်ဆက်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးအားလုံးဆိုဒ်များဒီနေရာမှာစာရင်းသွင်းသည်အရေး၊အရေး၊ရေးသားဖော်ပြချက်အသီးအသီးအဘို့ထိုသူတို့။ အခုတော့သင်လုပ်ဖို့ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး သင်ရှိသည်လိမ့်မည်အချိန်ဖြုန်း၊သင်အလွယ်တကူဆုံးဖြတ်ရန်အရာနှစ်ခု၏အစားထိုးအတွက်စိတ်ဝင်စားကြ။ ဒါကြောင့်ဘယ်အရာကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်? ပေါ်တွင်နှိပ်ပါအထက်နဲ့စတင်တစ်ဦးကိုချက်ချင်းလက်ငင်းနှင့်ဆက်စပ်လူတွေထောင်ပေါင်းများစွာ၏အပေါ်ကဲ့သို့ဆိုက်များကို ။
သင်ငြီးငွေ့၏ပေးဆောင်ဖို့လူတွေကိုတွေ့ဆုံရန်? ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲဒီအခမဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များအဘယ်မှာအရာအားလုံးကိုအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။ အဆုံးသတ်မှကောလာဟလများနှင့်လက်လှမ်းအပေါ်ကန့်သတ်ရန်။ တက်လက်မှတ်ထိုးခြင်းနှင့်စစ်ဆေးကြောင်းသင်တို့အဘို့အအခမဲ့ချိန်းတွေ့မခိုးသင်တို့၏နာမ! အောက်ပါအားဖြင့်၊သင်တို့လက်ခံကွတ်ကီးများအသုံးပြုခြင်းများကိုဝန်ဆောင်မှုနှင့်ကမ်းလှမ်းမှုနှင့်အညီသင့်ရဲ့အကျိုးစီးပွား၊အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်အကဲဖြတ်ဖို့အသုံးပြု၏။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်နှင့်တွေ့ဆုံ! အဆင်သင့်လုပ်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များသင်လိုအပ်ဘယ်မှာမှမှတ်ပုံတင်နဲ့ဝယ်ဖစ္မည္။”အခမဲ့ရက္မ်ား”၊အားလုံးကြောင့်။ သင်ချင်တယ် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး၊နှင့်ချိတ်ဆက်လူသစ်နှင့်အတူ? သင်တွေ့ဆုံရန်ချင်တစ်ဦးတစ်မရှိဘဲကန့်သတ်? ပူးပေါင်းအဝန်းအားဖြင့်ရိုးရှင်းစွာမှတ်ပုံတင်ဖြည့်စွက်အားဖြင့်အောက်ပါပုံစံကို။ အလျင်အမြန်နဲ့အလွယ်တကူရှာဖွေချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ဆက်သွယ်ရန်အတွက်တစ်ဦးတစ်၊မှတ်တမ်းတွင်မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်။ ဓါန္မွလွိဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါကမ္ဘာသစ်၏ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များအားလုံးကိုလုံးဝအခမဲ့။ ကြောင့်အသီးအသီး၏အသား၌တွေ့ဝိညာဉ်နှမရှာ၊ချိန်းတွေ့ဗီဒီယိုများ၊အခမဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမတို့အဘို့၊ဒီအလွယ်ကူဆုံး၊အမြန်ဆုံးနှင့်အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းသင့်ရဲ့ရှာဖွေရေး။ သင်တွေ့ဆုံသည့်အခါအမျိုးသမီးတစ်ဦးသို့မဟုတ်လူကို၊ဒါကြောင့်အမြဲအဖြစ်လွယ်ကူသောအဖြစ်ချင်ပါတယ်။ ဤသည်အဘယ်ကြောင့်အလွန်အရေးကြီးသည့်အတွက်ဗွီဒီယိုနှင့်ချိန်းတွေ့ဆိုက်ကိုဆက်ကပ်ရန်၎င်း၏အဖွဲ့ဝင်တဦးတည်းကရိုးရှင်းပြီးအလိုအလျောက်ချိန်းတွေ့ကိရိယာ။ ရှိပြီးသားအများအပြားအခမဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များထွက်ရှိပါတယ်ရှိပါတယ်။ ရွှေမှတ်ပုံတင်ရေးပြီးနောက်မကြာခဏခံရဖို့ရှိပါတယ်မှဆုတ်ခွာ။ ဒီတန်ပြန်ရန်၊ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုကမ်းလှမ်းသူ့ကိုတစ်ဦးချိန်းတွေ့ဆိုက်တာဝန်ခံလုံးဝအခမဲ့နှင့်အလွယ်တကူအားလုံး။ သငျသညျဆိုပါက အနက်သို့မဟုတ်ပဲတစ်ညဒီမှာ၊သင်တွေ့လိမ့်မည်သင်၏စိတ်ခံစားမှု။။။။။ ဒီမှာမရှိဘဲ၊မိစ္ဆာတိ၊သင်ဘယ်တော့မှလိမ့်မည်မေးများအတွက်ပေးဆောင်ဖို့အစည်းအဝေး။ အခြားမတူဘဲချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ၊အခမဲ့ချိန်းတွေ့၊မှတ်ပုံတင်ခြင်းအခမဲ့မဟုတ်ဖြစ်ပါသည်:သငျသညျမလိုအပ်ပါဘူးတင္ရသို့မဟုတ်အခြားချေးငွေဆက်သွယ်ဖို့နဲ့စကားပြော။ သင်သည်ချက်တင်စကားပြောနိုင်နှင့်အတူအခြားတစ်ဦး၊အခမဲ့မရှိပါ! ဟုတ်ကဲ့၊မှတ်ပုံတင်ခြင်းအခမဲ့အပေါ်အများဆုံးချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များမှလွဲ။၊အခမဲ့ချိန်းတွေ့၊သင်သည်လည်းပျော်မွေ့၏ဆိုက်နှင့်ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲနှင့်မတူ၊အများဆုံးချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ! ရှာဖွေနေနေတယ်ဆိုရင်၊သင်ကမဆပ်ကြပါလျှင်ဘာမှမ! ေဒါကြောင့်အများအပြားသတင်းစကားများ၊၏တစ်ခုတည်းအမျိုးသမီးများကိုသို့မဟုတ်ယောက်ျားကိုေဖဲဘာမှမပေးဆောင်ခြင်းမရှိဘဲနှင့်ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲ!!!! သင်ငြီးငွေ့၏ပေးဆောင်ဖို့လူတွေကိုတွေ့ဆုံရန်? ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲဒီအခမဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များအဘယ်မှာအရာအားလုံးကိုအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။ ကောလာဟလများနှင့်လက်လှမ်းအပေါ်ကန့်သတ်ဖို့အင်္ဂါအဆုံးသတ်ပါပြီ။ တက်လက်မှတ်ထိုးနှင့်ထုတ်စစ်ဆေးတဲ့အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုချိန်းတွေ့အတွက်သင် သူတို့မခိုးယူမည်
တစ်ဦးချိန်းတွေ့ဆိုဒ်ဖြစ်ပါသည်တစ်အသိုင်းအခမဲ့ကမ်ဆက်သွယ်ရေးများအတွက်လူအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ကျော်ထံမှ။ ရှည်လျားသည်စုဝေးတစ်ဦးကြီးများလူအများ၏ရှေ့မှောက်၌ဒေသခံကင္မရာမ်ားကိုချက်တင်နှင့်အတူသစ်နဲ့စိတ်ဝင်စားစရာ။ ဤအမျိုးအစားဆက်သွယ်ရေးအလုံးဝအခမဲ့နှင့်ရှာဖွေဖို့ရန်ခွင့်ပြုသည်သူငယ်ချင်းထက်အများကြီးပိုမြန်လူမှုကွန်ယက်နှင့်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ။
ကျွန်ုပ်တို့အလေးအနက်ချိန်းတွေ့ဆိုက်ချင်သူလူများအတွက်ရှာဖွေရန်အဘို့အချိန်းတွေ့ဆက်ဆံရေးနှင့်အရွယ်ရောက်ချိန်းတွေ့။ အလှဆုံးနှင့်ၡမ်ားအမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသားများ။ အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့အတွက်လူပျိုမိန်းကလေးများနှင့်ယောက်ျားလေးများအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ကျော်ထံမှ။ လျှင်သင်ဝမ်းနည်းဖွယ်ဖြစ်ကြောင်းပြော:”ငါသည်အချင်ချင်းကို”၊ကျွန်ုပ်တို့၏မေတ္တာရှင်ကူညီလိမ့်မည်သင်သည်အတွေ့အခမဲ့ချိန်းတွေ့၊ဆက်ဆံရေးသို့မဟုတ်ချိန်းတွေ့အတွက်လိင် ဒါဟာချစ်ကြောင်းရွေ့လျားကျွန်တော်တို့ကိုရှေ့၊အမွ်၊အသစ်အတွေးအခေါ်များနှင့်အသစ်အစည်းအဝေး။ မှတ်ပုံတင်ခြင်းကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ပေါ်တွင်လုံးဝအခမဲ့နှင့်မယူတတ်အချိန်အများကြီးပဲကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြောပြပိဳင္စံ: ကျွန်တော်ထင် ကျနော်တို့တာဝန်ရှိယင်း၏အသုံးပြုသူများမှ၊ဒါကြောင့်ကျနော်တို့မသုံးကြဘူးအစည်းအဝေးမပါဘဲ။ သင်ပြုရန်ရှိသည်အားလုံးသည်အကောင့်တစ်ခုဖန်တီး၊ထည့်အနည်းငယ်ဓာတ္ပံုမ်ား၊ဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်တစ်ဦးချိန်းတွေ့သို့မဟုတ်ချိန်းတွေ့မေးခွန်းလွှာ၊နှင့်ရှာနေစတင်ချိန်းတွေ့၊ရော၊လိင်၊သို့မဟုတ်မေတ္တာ။
ဆိုက်ဆုံဆုံစန္ဒရား မိုက်ကယ်ဖြစ်ခွဲခြားဖြစ်ပါတယ်အကောင်းဆုံးလိင်နှင့်အကောင့်ဆိုဒ်များ၊အထူးသဖြင့်အချို့မင်းသ။ မှတ်ပုံတင်ပြီးနောက်:ပါကကျေးဇူးပြုပြီးအဆိုပါဝက်ဘ်ဆိုက်င္။ မိုက်ကယ်-ဆက်သွယ်ကမ်းလှမ်းအလွန်ပူကုန်သွယ်ရေး၊ ကနေတဆင့်ကမ်သိုမည္၊ထို့ကြောင့်မူပိုင်ခွင့်များအတွက်ကြီးမားတဲ့ပရိသတ်။ ကလပ်၏အစည်းအဝေးများအတွက်ရှယျအိုမြား၏ဦးဆောင်မှုပံ့ပိုးပေးဖြစ်ပါတယ်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များအိုများအတွက်။ အားလုံးနေသော်လည်း၎င်း၏ပြင့္လင္းျမင္သာ၊ေျမဆိုက်ရဲ့အရေးစမ်းသပ်ပြီးသူတို့ရဲ့အသက်အရွယ်ခန့်မှာနှစ်သုံးဆယ်။ စမ်းသပ်ဖို့အတန်းကလပ်အစည်းအဝေး၊ဒါကြောင့်မကြာခဏပြောကောင်းသောလိင်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များအပေါ်ရေတွက်စေနိုင်တလက်၏လက်ချောင်း။ ဒီဇိုင်းအစီအစဉ်များလိင် အတူတူပဲ။ မကြာခဏအခွံချည်းသို့မဟုတ်၊အဆိုးဆုံးဖြစ်ရပ်မှာ၊အဆက်မပြတ်ချွတ်၊အရည်အသွေးမြင့် ၏ဆိုဒ်များအားဆက်ကပ်အပ်နှံဗွီဒီယိုအသစ်အသိုင်းအဖို့ခက်ခဲရှာပါ။ လယ်ရီ၊လိင်ချိန်းတွေ့ဆိုက်အစစ်လည်းဖြားယောင်းရန်မည်သို့သိတယ်၊ဒါကြောင့်ရှိပါတယ်စမ်းသပ်အဓိကချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များများအတွက်လိင်တူချစ်သူလူတို့အဘို့အရှာဖွေနေပြတ်လိင်နှင့်ဒီနေရာမှာသူ့အဘို့အကြံပေးချက်များရှာဖွေခြင်းတစ်ဦးလိင်မြည်းကိုရောအစီအစဉ်မှာအတန်ငယ်အထူးမျိုး။ မတူဘဲအထွေထွေဆိုဒ်များကဲ့သို့အီး-အလွန်ကောင်းမွန်သောသို့မဟုတ်ည့္က်ရော၊ဒီဆိုက်တွင်အထူးပြုသောမြည်းအစည်းအဝေးအစီအစဉ်နှင့်လိင်ချိန်းတွေ့။ သို့သော်အဘယ်အရာကရော? ဆိုက်ပါဘူးသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တိ? ကြောင့်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့ပြီးဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအပေါ်င္။ ပရော၍ပရောတင်ပြကြသည်ဖြစ်တစ်ဆိုဒ်အတွက်အထူးပြုရှာဖွေတဲ့အစီအစဉ်နှင့်အမည္း၊ပဲဆိုချက်ချင်းအကြောင်းဤကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ကညျ့၎င်းတိ။ ဆိုက်ပေါ်တွင်
တကယ်တော့၊ချက်တင်ဖြစ်ပါတယ်ရိုးရှင်းစွာမေတ္တာအားဖြင့်အားလုံးအတွက်ရိုးရှင်းသောအကြောင်းပြချက်ဖို့ခွင့်ပြုထားကြောင်းလျင်မြန်စွာချိတ်ဆက်အကြားအမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးနှင့်အတူ၊၎င်းစူးရှဝက်၊ချွန်ထက်သို့မဟုတ်ချစ်ကြည်စွန့်စားမှုမပါဘဲအနက်ဖြန်နေ့၌။ အပျော်အပါး၏အများလျှောက်လမ်းနှင့်ဘယ်အရာမှပြန်လာအတွက်မှလွဲ။၊ဖြစ်ကောင်းခြင်းတ္ဆက္ၾလမ်းပေါ်မှာ။ သင်ပြောတဲ့အခါစကားပြောခန်း၊ဆိုက်မှဆင်းသက်လာသောကျွန်တော်တို့ကိုပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့ဗော့၏စိတ်သည်ဗီဒီယို။
အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့သည်အလွန်ဖွံ့ဖြိုးပြီး၊အထူးသဖြင့်သာ။ ယနေ့အချိန်တွင်၊အများအပြားရှိပါတယ်တစ်ခုတည်းသောလူမျိုးအတွက်ပြင်သစ်အတွက်ရှာနေကြသူအလေးအနက်နှင့်ရေရှည်တည်တံ့သောဆက်ဆံရေး။ ထိုအခါမူကားတစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက်ပြင်သစ်လို။။။ဘာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသစ်၊အယူအဆကလာဖြောင့်မှဗာ! တစ်ဦးအေဂျင်စီများသာချမ်းသာတဲ့လူများရှာဖွေရေးအတွက်ကြီးစွာသောချစ်ခြင်းမေတ္တာ။ ၎င်း၏စျေးနှုန်းအတော်လေးမြင့်မား၊ဒါပေမယ့်၎င်း၏အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ကြီးထွားဖို့ဆက်လက်။ ။။။။။ ကျွန်တော်တို့ကိုအများအပြားအသုံးပြုလို၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုခေါ်မိန်းကလေးငယ်များ၊အထူးသဖြင့်သာ။ ဒီအတွက်ကြောင့်အများကြီးမေးခွန်းတွေရှိပါတယ်။ အဘယ်ကြောင့်သုံးစွဲခြင်းသူတို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှု? ဆိုလိုသည်၏နာမတော်ကိုအောက်မှာ”ခေါ်ထုတ်၊”သူတို့ပာဆုိေ။ ဒီနေ့အတွက်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိအလွန်ကွဲပြားခြားနားသောအရပ်တို့ကိုနေ့စဉ်ချိန်းတွေ့။ ဒါကြောင့်သင်တွေ့လိမ့်မည်သင်ကံကောင်းများမှာ၊သင်တို့အဘို့ရှာကြသည်အတည်ငြိမ်နှင့်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေးသို့မဟုတ်ဆက်ဆံရေးအပူနှင့်ခဏတာ။
ချိန်းတွေ့မပါဘဲမှတ်ပုံတင်သည်မှာတစ်ဦးချိန်းတွေ့ဆိုဒ်ဖြစ်ပါသည်နှင့်အတူစကားပြောလုံးဝအခမဲ့နှင့်မပါဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ရင်းပေးသွင်းခြင်းမရှိဘဲအီးမေးလ်၊မဟုတ်သလိုပုဂ္ဂလိကအချက်အလက်။ သင်ထဲ၌ချက်ချင်းနှင့်ပြည့်စုံသောအဖော်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ထံမှလူအပေါင်းတို့တိုင်းဒေသကြီးဆောက်လုပ်ဖို့မေတ္တာဆက်ဆံရေးအရှိန်မြှင့်စည်းအဝေး၊သို့မဟုတ်ပဲ။ တစ်မူထူးခြားသောတည်နေရာကို၊ဒါမှမဟုတ်အဘယ်သူမျှမကပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်သည်ဝေမျှ၊ဒါမှမဟုတ်သိမ်းဆည်းထားသော၊ဒီအအခမဲ့ချက်တင်ခန့်ဝန်ဆောင်မှုချောမွေ့ဖို့ဒီဇိုင်း၏။ လုံးဝအခမဲ့နှင့်အတူအမြဲတမ်းအဖွဲ့၏အိပ္ခ။ အစည်းအဝေးမပါဘဲမှတ်ပုံတင်၊အခွင့်အလမ်းများအတွက်လက်ငင်းအစည်းအဝေးမပါဘဲမှတ်ပုံတင်သို့မဟုတ်လော့ဂ်အင်၊အကိုချက်ချင်းသင်တို့အဘို့အရရှိနိုင်တဲ့။ ရှားပါးသောအချက်အလက်များအတွက်လိုအပ်သောနိမ့်ဆုံးရှာ(ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျားမ၊အသက်အရွယ်၊နှင့်တိုင်းဒေသကြီး)၊သင်သည်လည်းပေးပိုဆောင်းအချက်အလက်သို့မဟုတ်မွမ်းသင့်ရှာဖွေအပေါ်အခြေခံပြီးပိုမိုတိကျတဲ့သတ်မှတ်ချက်များ၊ဤအင်္ဂါရပ်လုံးကိုစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်တယ်များမှာ၊နှင့်အကျိုးကျေးဇူးများရရှိနိုင်မှာစကားပြောဝင်းဒိုး။ ဤဆိုက်သည်ရန်ရည်ရွယ်သောသူလူများအတွက်ချင်ကြပါဘူးဖို့အချိန်အများကြီးဖြုန်းအပေါ်တစ်ဦးချိန်းတွေ့ဆိုက်မှအခြားလူတစ်ယောက်မှကန့်သတ်အခြေခံအချက်များ။ ဤသင်ခွင့်ပြုဖို့ချက်ချင်းစတင်အွန်လိုင်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးနှင့်အတူစိတ်ဝင်စားသူလူဘဲဖြတ်သန်းသွားသည့်ကိစ္စမှတ်ပုံတင်လုပျထုံးလုပျသို့မဟုတ်လစာစျေးမႈ၊နှင့်ဆိုက်အသုံးပြုခြင်းလုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပြီးမည်သည့်တာဝန်ဝတ္တရားကိုမှတ်ပုံတင်ရန်သို့မဟုတ်။ ဤဆိုက်သည်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခန်းများအတွက်”လူမျိုးကြီး”အတွက်လူငယ်များနှင့်ဆယ်ကျော်သက်တွေလည်းရချင်သူမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်ဖြစ်စေ၊အကြောင်းပြောဆိုသည့်အကြောင်းအရာဖြစ်ကြောင်းသာဖို့စိတ်ဝင်စားလူငယ်များ၊သို့မဟုတ်ရုံအတွက်ပျော်စရာရှိသည်။ တစ်ဧည့်ခန်းသုံးမပြုရန်သာဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်လူငယ်တွေကတော့အောက်မှာအသက် ၁၈၊ဒါကြောင့်သူတို့အတွက်အနားယူတိတ်ဆိတ်တဲ့ ဧရိယာအဟောင်းတွေလူသုံးစွဲခွင့်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး။ တစ်ခုတည်းသောအလွန်ကြီးစွာသောလူအခွင့်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက်ဤပြပွဲအအိပ္ခ၊မတွန့်ဆုတ်ဖို့ဘန်ကီမွန်းကြပါဘူးတဲ့သူတွေလး၏ဝိညာဉ်စကားပြောမပါဘဲမှတ်ပုံတင်ဆယ်ကျော်သက်များအတွက်။ မပါဘဲမှတ်ပုံတင်ပြီးဆက်သွယ်သီးသန့်မြင်ရဖို့အခမဲ့ချိန်းတွေ့သောဆိုဒ်များ:စကားပြောမပါဘဲမှတ်ပုံတင်၊ချိန်းတွေ့မော်ရိုချိန်းတွေ့ဘဲယူျဦးကြိုပြုခြင်းနှင့်စကားပြောချောကလက်ဝက်ဘ်ဆိုက်အခမဲ့ချက်တင်ချက်တင်
လွန်းများစွာသောအမျိုးသားများမှတဆင့်မသွားဒီမယ့်တဲ့အခါသူတို့ဆက်ဆံရာတွင်နှင့်အတူစိမ်းသောကြောင့်၊သူတို့မသိရပါဘူးအဘယ်သို့သောအကြောင်းပြောဆိုရန်မိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်အတူ။ ဒီနေရာမှာအဘယ်အရာကိုသင်သိရန်လိုအပ်သည်။။။ ၏တွေ့ဆုံမေးမြန်းမည်အကြောင်းပြောပြအတွက်သုံးစွဲအချိန်သင့်ကုမ္ပဏီ၊ဒါပေမယ့်သင်ရလိမ့်မယ်သင်အလွန်သာယာသောနှင့်လူတစ်ဦး! လူအတော်များများမှာကြောက်ဖို့အသေခံမှဆွေးနွေး စိတ်ကူးတစ်ခုနှင့်အတူအမည်မသိရးသားႏိုင္ျအနက်ရောင်အပေါက်မှာအဆိုးဝါး။ အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြီးမြတ်ကြင်နာမှု၊ပြင်ဆင်ကြပြီတစ်အသေးစားအရအသိအသီးအသီးအခြား။ ဒါ့အပြင်၊ကျွန်တော်သိသည်အကြောင်းပြောနေတာမိန်းကလေးတစ်ဦးမှအရေးကြီးသည်၊ဒါပေမယ့်မလုံလောက်ပါတယ်:ကျနော်တို့ပြင်ဆင်ကြပြီဤဆောင်းပါးနှင့်အတူအမီဆက်လက်၊အောက်မေ့သတိရကြောင်းသင်ရှောင်ကြဉ်ပါရှိရမည်များအားလုံးကုန်ကျစရိတ်မှာရှောင်ရှားရန်တစ်ဦးစကားလက်ဆုံ၏ပုံစံအတွက်မေးခွန်းတစ်ခု။ ဒီဟာအလွန်ဘုံအမှားသောကျွန်တော်တို့ကိုအများအပြားအောင်။ တခြားနည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်လုပ်ဆောင်သွားရန်အပြေးမှတဆင့်စကားပြောမေးခွန်းများကို၊သင်ကြိုးစားနိုင်ပါ။ အဲဒီစကားပြောဆိုချက်တွေကိုအလွန်ရိုးရှင်းပြီးဖြစ်ဖို့အသုံးပြုကြပါတယ်ပြောနေတာ။ ဤသည်အဘယ်သို့အလုပ်လုပ်ဖော်လုပ်နှင့်သင်ပြန်လာသောအခါမှအားလပ်ရက်အဘို့၊သင်သည်တစ်စုံတစ်ဦးတွေ့ဆုံရန်အခွင့်အလမ်းအားဖြင့်၊အတွက်သို့မဟုတ်မိတ်ဆွေများ။ သင်သင်အသုံးပြုနိုင်ကိုသိရ၏ဤစကားပြောဆိုသည့်အခါသင်ပထမဦးဆုံးသူမ၏တွေ့ဆုံရန်။ နှင့်ဤအမည်မှာသေချာပါစေခြင်းငှါအခြားသူများ။ ဒါပေမယ့်သတိထားဖဆွဲထားရမအပေါ်ဤအကြောင်းအရာ။ ဥပမာအားဖြင့်၊သငျသညျအစဉ်အမြဲတွေ့ဆုံခဲ့မိန်းကလေးတစ်ဦးဘူးခရီးသွားလာကြိုက်လား? ကျွန်တော်ဟာ၊အခြားတဖက်တွင်၊ ပေမယ့်သူမရှိခဲ့ဘူးရန်အခွင့်အလမ်းအပေါ်ခရီးသွားလာအကြောင်းအရာတစ်ခုကို၊အာရုံစူးစိုက်မှုကိုမဖြစ်မနေဖြစ်ပါသည်၊နေသမျှကာလပတ်လုံးအဖြစ်အတိအကျသိတယ်ဖို့ဘယ်လိုဆွေးနွေးပါ။ သင်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးမှအားလုံးသောနိုင်ငံများ၏အသီးအသီးသင်သွားကြဖို့အတူတကွ။ ဤအမှု၌၊သင်ပြဿနာတွေအများကြီးကိုရှေ့ဆက်ရွေ့လျား၊သငျသညျအတွက်ညပ်နေသောခံစားချက်အကြောင်းကြသည်မဟုတ်ပင်ဖန်တီးတော်။ အဆိုပါရည်မှန်းချက်အခါသင်စကားပြောကြောင်း၊ခရီးသွားလာ၊အများဖန်တီးရန်အပြုသဘောနှင့်အောင်မြင်တဲ့စိတ်ခံစားမှုသင်တွဲဖက်အတူ:ဖြေရှင်းဖို့အတွက်မေးခွန်းအများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုပူးတွဲခရီးသွားလာစီမံ။ သူ့ကိုမေး၊ဥပမာအားဖြင့်၊တစ်ကျောပိုးအိတ်သို့မဟုတ်ဇိမ်ခံဟိုတယ်ရှိမရှိ၊သင်ကြိုက်တတ်တဲ့တောင်တက်အတွက်ပီရူးသို့မဟုတ်တစ်ပါတ်အကြာအားလပ်ရက်အတွက်ဒိုက်။ ဒီနေရာမှာပွိုင့်ဖို့ရှာတွေ့သောသူလူအများတဲ့အတွက်ရှိတဲ့အတွက်စကားဝိုင်းနှစ်ခုလုံးအတွက်အဆင်ပြေခံစားရ။ အဖြစ်အလွန်ကောင်းစွာရှင်းပြခြင်းအားဖြင့်ငါ့ကိုမသာသူ၏ရောင်းအားအလုပ်ပုံကို”အဆွေခင်ပွန်း”အဖြစ်တန်ဖိုးအားဖြင့်အခြားသူများသိရန်လိုအပ်သင်သည်အဘယ်သို့ပြုမှကြိုက်အကောင်းဆုံး၊အမည်၊ပြောဖို့ကိုယ်တိုင်ပင်လျှင် သင့်ရဲ့ ရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအချိန်အတွက်သုံးစွဲသင့်ကုမ္ပဏီ၊ပြီးနောက်သင်ရလိမ့်မည်ကြောင်းအထင်အသင်အလွန်သာယာသောနှင့်လူတစ်ဦး! ဒီအသိမှတ်ကြလော့၊ဤနေရာတွင်အချို့သောအကြံပေးချက်များကူညီလိမ့်မည်ဟုတစ်ဦးလူတစ်ဦးသက်သာခံစားရနှင့်သင်၏ကုမ္ပဏီနှင့်စကားလက်ဆုံကြသူတို့ခံစားကြည့်ပါ:တစ်ဦးလျှင်လူတစ်ဦးတိရှိရှိဆုံးဖြတ်ဖို့သူတို့ကိုပြောပြ၊သူတို့ကိုအားပေးတိုက်တွန်းပြောဆိုရန်၊သူတို့အခမဲ့ဖြစ်ကြောင်း။ ဤကိစ်စတှငျ၊ပွင့်လင်းမေးခွန်း-မဖြေဆိုပါ”ဟုတ်ကဲ့”သို့မဟုတ်”မလုပ်ပါနှင့်”(ပိတ်မေးခွန်းများကို)-အလက်နက်တွေသင်လိုအပ်။ မတူဘဲပိတ်မေးခွန်း၊ဘယ်အရပ်ကစကားဝိုင်းကျင်းပထိုကဲ့သို့သောလမ်းအတွက်အဖြစ်မှရရှိတိကျမှန်ကန်အဖြေတဲ့မေးခွန်းတွေကိုမေးခဲ့တယ်၊ဒီနေရာမှာသင်ချင်လယ်ပြင်၌အလွတ်ထားခဲ့ပါကြောင်းဒါကြောင့်ဒီဖြစ်ပျက်နိုင်ခုန်ပြန်သင်လိုချင်တာအခါတိုင်း။ ဥပမာအားဖြင့်၊အကြောင်းကိုမေးမြန်းသူတို့ဝါသနာနှင့်လှုပ်ရှားမှုများအကြောင်းနဲ့သူတို့အတွက်မိမိတို့အအခမဲ့အချိန်၊သို့မဟုတ်အကြောင်းတစ်ခေါင်းစဉ်အကြောင်းအကျိုး(ဘာဂီသူတို့စကားကိုနားထောငျ၊သူတို့အားအဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုအပေါ်တစ်ဦးမိုးရာသီနေ့)။ ဤအပိုင်း၏အစကားပြောဆို၊သင်တိရှိရှိ မပြုလုပ်ရန်သင်သဘောတူသည်သိပ်စကားပြောနိုင်အောင်စကားပြောဆိုနိုင်ခြင်းဆက်ရေးဖို့အတွက်အအေး။ အမိန့်အတွက်ရှိသည်ဖို့တစ်သာယာသောစကားပြောဆို၊သင်ကြိုက်တတ်တဲ့အဆက်တည်းတွင်ဦးတည်ချက်နှင့်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်သူ့ရဲ့အဖြေ၊အစားထက်အဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲနေတဲ့အရာမရွိပါ။ ဒီတော့အာရုံစိုက်သည့်အခါစကားပြောနှင့်အတူတက်ကြွစွာအသံ။ ဒီတော့ဝေး၊ဤအချိန်များအတွက်အဆုံးမဲ့ နေစဉ်အနားယူသို့မဟုတ်ရှာဖွေနေ။ အားဖြင့်စကားပြော၊သင်လေ့လာသင်ယူကြလိမ့်မည်အသစ်တွေအများကြီးအမှုအရာ၊အမည်သည်(သင်သည်အဘယ်သို့ပြုရမည်)၊စဉ်းစားတွေးခေါ်သင့်ရဲ့လမ်းကို(ထင်မြင်ယူဆ)၊ဒါမှမဟုတ်သင့်ရဲ့အပြုအမူ(ဖို့ကိုဘယ်လိုသင်ကိုယ်တိုင်ထုတ်ဖော်ပြောဆို-အခါခေါင်းစဉ်သင်အကြောင်းကိုအသည်းအသန်)။ အားနားထောင်သောအခါ၊သင်ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးကြည့်ပါလျှင်အချို့သောပျော်စရာအမှုအရာ၊စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသော၊ကြောင်းသံသယရှိစရာမဖြစ်တခါတရံတွင်သင်သည်မည်သဘောသို့မဟုတ်နှစ်သက်သူတို့နည်းအတိုင်းပြု။ ဤကိစ္စတွင်အတွက်:နောက်တဖန်အ၊တဲ့သင်ခန်းစာကနေသင်ယူငါ့ကိုမယုံ၊သင်ချင်တယ်ဆိုရင်ဖြင့်တရားစီရင်ခြင်းကိုခံရတခြားသူတွေနဲ့၊မငြင်းခုန်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးတစ်ဦးအမြင်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ထက်အခြား။ သင်သည်အဘယ်မှာသင်ဆောက်လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်ယံု၊ အသိပေးကလူစကားပြောနှင့်မဆွေးနွေးချင်အနေနဲ့ထင်မြင်ယူဆသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ထက်အခြား။ ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ပြောနေလုံးဝမှန်ကန်အချက်အလက်ကော၊မိန္းမအတည်ပြုချက်၏အဖြေ၊အမှန်! ကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောထားကဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုအားပေးတဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုချင်ပညာအခြားသူများအပေါ်အခြေခံပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိပညာအ။ အခုအထိကျွန်တော်တို့ဟာဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေအောင်မြင်ဖို့မေးခွန်း၏အမြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ။ ဤမပါဘူးဆိုလိုခြင်း။ ထိုဆန့်ကျင်တွင်၊အများဆုံးမိန်းကလေးငယ်များဖြစ်ခဲ့ကြသူထောင်ရန်အချိန်ကြာမြင့်စွာအဘို့ဤသိပြီးမျှော်လင့်ဖို့သူတို့နေသောထွက်ရှာမည်။ ဒါကြောင့်အချိန်မှအမှားတစ်ခုလုပ်နှင့်အတူဖို့လိုလားသူတစ်ဦးကိုပိုမိုသိ။ ဤသည်မဟုတ်သောကြောင့်၊မိန်းကလေးနားထောင်ပြီးတဲ့နောက်ဆယ်မိနစ်၊စိတ္ညစ္စမေးခွန်းတစ်ခုအကြောင်းသိရန်လိုသည်တိုင်းအသေးစိတ်သူမ၏အသက်တာ၏။ မနိုင်လျှင်အလျင်အမြန်သူမ၏အာရုံစူးစိုက်မှုရသင့်အဖြေအတွက်၊သင်အားခွင့်ဆုံးရှုံးသွား၏။ ဒီဘက်ပါ၊သင်တိုတောင်းတဲ့အဖြေနှင့်အရိပ်အယောင်ဖို့အရေးအပါဆုံးမေးခွန်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ အပေါ် အဆိုပါမေးခွန်း”သင်ဘာလုပ်ပါသည်အသက်ရှင်သောသတ္တဝါ”၊အခါ၊သင်သည်အလုပ်လုပ်အဖြစ်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဂျင်နီယာများအတွက်စက်မှုအစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်သူအကြောင်း၊အထူးသဖြင့်ရောင်းဘတ်၊သင်အလိုရှိသောအဖြေအဖြေ”ငါမင္”အတွက်တော့၊အသေးစိတ်ပုံစံ၊အရာထက်လျော့နည်းအအိပ်မက်။ ဤကဲ့သိုတိုဟာသနှင့်သာယာသောပုံပြင်များကိုနားထောင်ရာ၏စိတ်ကူးတစ်ခုရရန်အဘယ်အရာကိုမျိုးကိုလူတစ်ဦး၏။ ငါမေးခွန်းတစ်ခုရှိသည်ကြောင်းကိုသင်၏အခမဲ့အချိန်။ ဥပမာအားဖြင့်၊သင့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုအကြောင်းခရီးစဉ်မကြာသေးမီကယူပြီးတစ်ဦးပုံပြင်ခတ္ထားတဲ့နေ့အဖြစ်၊လျှင်သင်အကြောင်းပြောနေတာအဟောင်းရည်းစား။ မည်သို့ပင်သင့်ရဲ့စိတ်အားထက်သန်ဖြစ်ပါသည်၊သငျသညျနိုင်အောင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကိုအတွက်မျက်စိ၏အခြားသူများ။ အဆိုပါလှည့်ကွက်အသိဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းပြောဆို။ အဓိကအကြောင်းပြောဆိုရန်၏အရေးအပါဆုံးဖြစ်ရပ်များနှင့်သူတို့ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့လုပ်။ ကျနော်တို့ဆိုနောက်ထပ်သွားမီ၊ကျနော်တို့မြင်ချင်နမူနာတွေအများကြီးအောင်မြင်သော၏အပြန်အလှန်၊အရနိုင်အောင်ကျနော်တို့သိကျွမ်းနှင့်အတူအကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်ပေးအပ်သည်။ တစ်ဦးဂန္အမှားအများအပြား၏ အမ်ိဳးရရန်ကြိုးစားနေကြသည့်အနီးကပ်ကိုဖန်တီးဖို့။ အဘယ်သို့ငါဆိုလိုခြင်းဖြင့်နှစ်သိမ့်သည်ကြိုတင်ခန့်မှန်းကျွန်မသမီးအကြောင်းပြောပါတယ်၊သူမ၏ဘဝကိုသည့်အခါသူမခဲလှ၏အကြောင်းသိတယ်။ ဒီအတွက်ကြောင့်၊အများအပြားစတင်ထွက်လွန်းပုဂ္ဂိုလ်ရေး;စဉ်အတွင်းစကားပြောဆိုရဲ့အစမှာ၊ဆက်သွယ်ရေး၊သူတို့ရှောင်ကြဉ်၊ဥပမာအားဖြင့်၊မေးကြောင်းသူ့ကိုသူ၏ဆက်ဆံရေးနှင့်အတူသူ၏မိသားစုအကြောင်းကိုသွားလေ၏သောနေ့စွဲအပေါ်မိတ်ဆွေတွေနဲ့အတူ၊နှင့်ပတ်သက်သောဆွေးနွေးပွဲ။ ဒီမှန်မှန်ရိပ်တစ်ခုအဖြစ်ကျူးကျော်သူတို့၏ကိုယ်ရေးအကိုမသိလျှင်လုံလောက်သည်။ ဤသည်ခက်ခဲသောမေးခွန်းကြောင့်၊အခြေအနေအပေါ်မှာအများကြီးသင့်ရဲ့မိတ်ဖက်နှင့်မည်သို့သူတို့သိရဖို့တယ်။ အတွင်းအွန်လိုင်းအစည်းအဝေး၊ငါသည်အများသောအားဖြင့်နှစ်သက်ရရှေ့တော်၌ထိုပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသိရစွန့အဝေးလွန်းသို့ငါ့နှစ်သိမ့်ဇုန်။ တကယ်တော့၊မိန်းကလေးငယ်များသောအားဖြင့်အများကြီးရှိသည်အဆက်အသွယ်၊ငါသည်အန္တာရာယ်ချင်ကြပါဘူးသူတို့ကိုဆုံးရှုံးသွား၏မရှိခြင်းများအတွက်အကျိုးစီးပွား။ ပြီးတာနဲ့အစည်းအဝေးကျော်ဖြစ်ပါတယ်၊အရာအားလုံးကွဲပြားခြားနားသောဖွစျလိမျ့မညျ။ အမှု၌တစ်ဦး၏မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံနိုင်အောင်ပိုမိုမြန်ဆန်တိုးတက်မှု။ ကိုရည်မှတ် သင်သည်မပြုလျှင်၊အဲဒီအတွက်မိနစ်ပြီးနောက်သင့်ရဲ့အစည်းအဝေးမပြောသင့်မိသားစုသောကြောင့်၊လူအများတို့သည်မစွမ်းနိုင်အယူအခေါင်းစဉ်၏စကားလွန်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ၊မည်နိုင်ရန်အတွက်ပိုမိုနီးကပ်မှမိန်းကလေး၊သင်ပေးဆောင်သောအကွာအဝေးကိုစောင့်ရှောက်ပြီးစောင့်သိမှရရန်သူမ၏ပိုကောင်း။ သင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်၊ကျေးဇူးပြုပြီးစကားပြောမိန်းကလေးစကားပြောသူမအရာတစ်ခုခုအကြောင်းကိုရယ်စရာ! လိုလျှင်၊သငျသညျမတော်တဆအပေါ်လမ်းပေါ်မှာတစ်ပါတီသို့မဟုတ်ချိန်းတွေ့အဂ်င္စီ၊ပထမဦးဆုံးအရာသင်ပြုလိုအပ်သည်များစီမံခန့်ခွဲဖို့တဲ့အချိန်၊အတူတူတက်စေ၊ထိုသို့ယူဆတဲ့မိန်းကလေးကိုယ့်အတွက်စိတ်ဝင်စားနိုင်ငံရေးတွင်:သင်ရှိသည်နိုင်ပါလိမ့်မည်အဓိပ္ပာယ်စကားပြောဆိုချက်သူမ၏နှင့်အတူ၊သင်ကြိုက်လျှင်ထိုကဲ့သို့သောအ။။။။ သို့သော်၊အဖြစ်ရှင်းပြခဲ့သည်အတွက်ပထမဦးဆုံးအစိတ်အပိုင်းများ”အဘယ်အရာကိုဆွေးနွေးဖို့မိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်အတူ”၊သင်ယေဘုယျအားဖြင့်ရှောင်ကြဉ်ကြောင်းဖော်ပြ၏ခြားနားချက်မှာအစအဦး၏တစ်ဦးအပြန်အလှန်ငြင်းခုန်အတွက်တစ်လမ်းကဝိ၏အမြင်များဖြစ်ကြောင်းပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနှင့်အတူဆက်သွယ်ခြင်း။ လွန်အကိုက်ညီမဟုတ်နှင့်အတူကျွန်မဘယ်လိုမှပေါ်ရွှေ့ပြီးခဲ့သည့်နှင့်အညီအမျှအရေးတ သို့သော်၊ဤအခြေမရှိသလောက်စေရန်အပြုသဘောစိတ်ခံစားမှု။ ဆန့်ကျင်ဘက်။ ဤသဘောမျိုးခုနှစ်၊ငါချင်ကြပါဘူးအဖြစ်သူသူမ၏ဝမ်းနည်းဖွယ်နှင့်အမျက်ထွက်သောကြောင့်၊သူမအကွက်ငယ်စိတ်ခံစားမှုပြည်နယ်နှင့်အတူသင့်ရှေ့မှောက်တွင်။ ဒီ ၏အကြားကွာခြားချက်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးဦးနှောက်အဟုတ္ထင္ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်ရွယ်ချက်သည်အလွန်ကောင်းစွာ:ကျနော်တို့ယောက်ျားဖြစ်ကြောင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယဉ်ကျေးမှုကို၊ဂရုစိုက်၊သို့သော်ကျွန်တော်ထင်စေခြင်းငှါ၊၊ကျွန်မတို့အားလုံးကိုအကျိုးစီးပွားအတွက်ကျားသောအားဖြင့်အဘယ်သူမျှမအဓိပ္ပါယ်မရှိခြင်း။ အဘယ်သူမျှမအတွက်ရှက်တဲ့။ အားလုံးနှင့်အတူဤ၊ကျနော်တို့ပထမဦးဆုံးသဘောပေါက်ကြောင်းအားလုံးနီးပါးယောက်ျားကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏။ ထိုအခါသတိရတဲ့အမျိုးသမီးများကိုမတူညီသောလိင်၏အဖြစ်။ သိဒီ၊ကျွန်တော်နားမလည်ကြဘူးအဘယ်ကြောင့်ဤအကြောင်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပါအကောင်းဆုံး၏ကနဦးအဆင့်မှာစကားပြော။ လွန်းများစွာသောလူ။ ဒီဘက်ပါ၊သင်မည်မဟုတ်ထွက်မတ်တပ်ရပ်မှအများဆုံးယောက်ျားတွေ။ ထို့နောက်သင်တက်ရောစပ်နှင့်အတူလူအများကြီးနေသောများသောအားဖြင့်ဆိုးသောခေါင်းစဉ်နှင့်ပတ်သက်။ ဒါကြောင့်သင်ကနေသောလျှို့ဝှက်ကြံစည်မှုအတွက်သင်တန်းဤလမျးညှနျ။
နှင့်အတူဤဝန်ဆောင်မှု၊သင်ဆက်သွယ်နိုင်အခမဲ့နှင့်အတူစိမ်း၊အမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသားများတွင်အသက်ရှင်သူသည်ပြင်သစ်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲ။ အားဖြင့်တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ကျား၊သွားရန်အနူးရဲ့ထိပ်မှာချက်တင်အတွက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်အကြံပြုစကားပြောသည့်အကြောင်းအရာ။ ထိုအတောအတွင်းတွင်၊သင်ဝင်ရောက်ရန်အကြောင်းအဖွင့်လှစ်ပထမဦးဆုံးအဖွဲ့ဝင်များမှရှာဖွေတွေ့ရှိသောဆိုက်၊လုပ်မိတဲ့အခါနာရီ၊တက်တွေ့ဆုံရန်နှင့်အရေးအစာအိမ်တွင်အကြောင်းဧည့်ခန်း။ သင်ထည့်နိုင်သည်ဤဆိုဒ်မှသင်၏အကြိုက်ဆုံးကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့် ဃပေါ်မှာသင့်ရဲ့ကီးဘုတ်ထည့်ရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခမဲ့ချက်တင်လိပ်စာမှသင့်အကြိုက်ဆုံးလျှင်၊သင်ပြီးသားရှိသည်မဟုတ်၊ဟုတ်ပါတယ်။
အစအဦး၌၊ဒါကြောင့်ကြောက်စရာကောင်းရှိနိုင်ပါသည်မိန်းကလေးများပြောပြရန်၊ဒါပေမယ့်တစ်ချိန်ကသင်ပြောနေတာဖွင့်၊အဆောက်အအုံဆက်ဆံရေးကိုလွယ်ကူသောဖြစ်လာ။ ရှိပါတယ်အမျိုးမျိုးသောဂိမ်းများနှင့်ဆိုဒ်များကိုပူဇော်ကြောင်းဆွေးနွေးဖိုရမ်များအတွက်နှင့်အတူဆက်သွယ်ခြင်း။ ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆွေးနွေးချိန်းတွေ့ဆိုက်၊သို့မဟုတ်အွန်လိုင်းဂိမ်းများရှိပါတယ်၊ရိုးရှင်းပြီးအတိုင်းအကြောင်းသင်ကူညီလိမ့်မည်ကိုယ်အလိုသို့ဝင်ရန်ဆွေးနွေးမိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်အတူ။
အွန်လိုင်းဗီဒီယိုချက်တင်ကနေတစ်ကမ်၊ဤတစ်ဖြစ်ပါသည်အသက်ရှင်သောချက်တင်အတွက်အမှန်တကယ်အချိန်၊လုံးဝအခမဲ့နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲ! ပို့နဲ့မိနစ်သင်တွေ့ဆုံရန်တစ်စုံတစ်ဦး။ ချိတ်ဆက်နှင့်အတူငယ်ရွယ်မိန်းကလေးများနှင့်ယောက်ျားလေးများအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ကျော်ထံမှအသုံးပြုပြီးဗီဒီယိုကင်မရာ။ စည်းချက်၏နေ့ရဲ့အသက်တာတစ်သက်သာမထွက်ခွာကျွန်တော်တို့ကိုအလွန်အကျွံအခမဲ့အချိန်။ ဒါပေမယ့်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အတူအခြားလူများသည်အမြှောက်၏၊ကျွန်ုပ်တို့၏ခံစားချက်၊အဆက်ဆံရေးကိုကျွန်တော်တို့အကြောင်းအခြားလူများနှင့်အတူ၊ဖြစ်ကြ၏အမ်ဴိးအစားနှင့်အသုံးဓံ။
ကျနော်တို့စနစ်တကျကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုစကားပြောဖို့ကူညီအထီးကျန်နှလုံးဆက်သွယ်ပြီးဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမရှိတယ်တားမြစ်သည့်အကြောင်းအရာ၊သင်ဖော်ပြနိုင်သည်ကိုအားလုံး၏ထင်မြင်ယူဆချက်။ ကိုယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြောင်စတင်ခဲ့ပြီးနှင့်အချို့သောအချိန်ဖြုန်းဖို့ပြောနေတာဖွင့်။ ခြင်းရှိမရှိသင်တို့အဘို့အရှာကြသည်တစ်ဦးတညဉ့်ရပ်တည်ချက်သို့မဟုတ်အသက်အဘို့အမိတ်ဖက်လုံးဝကိုသင်တက်ဖြစ်။ ကျွန်တော့်ထင်မြင်ချက်အရ၊မရအတွက်အသက်ရှင်သောဗီဒီယိုချက်တင်မပုံမှန်? ကျွန်တော်ယုံကြည်တာအတွက်သူ့ကို! ရှက်ဖြစ်ရကြဘူးအခါသင်စကားပြောပါ။ အင်တာနက်ကိုခွင့်ပြုထားပြီးအများဆုံးရဲအရာမပါဘဲအရှက်နှင့်အပြစ်ရှိတယ်၏။ ထို့အပြင်ခုနှစ်၊ဘာမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ပေါ်တွင်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ကြောင်းသင်မည်သည့်အဆင်မပြေ။ ပဲမိန်းကလေးများအဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေတစ်စုံတစ်ဦးမှပြောဆိုရန်၊သူတို့ဘာမှမပို။ ကိုအလည်ကြောင်တွေကိုကြည့်ရှု တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်။ အပြားမိန်းကလေးငယ်များအပေါ်လောလောဆယ်တွင်ဖြစ်ကြောင်း၊လေထုအနီးကပ်ကြည့်ရှုယူနှင့်ဝင်ဖို့သူတို့ရဲ့စကားပြော။ ရွေးချယ်မိန်းကလေးကြိုက်တတ်တဲ့နှင့်ကြိုးစားဖို့ပိုကောင်းတဲ့သူတို့ကိုသိမှရပါ။ သူတို့ကိုမေးမေးခွန်းများ၊သူတို့နှင့်အကြောင်းသိသင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၊သင်သည်သင်၏ဝါသနာ၊နှင့်သင်၏အိပ်မက်များ။ အားလုံးမိန်းကလေးများနားထောင်နိုင်သည်၊ဒါပေမယ့်ကျွန်မတို့နှစ်ယောက်စလုံးသိခဲ့ဘူးကိုယ့်လာပြော။ သငျသညျအစဉျအပေါင်းတို့ကိုချွတ်ကလပ်? ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုစကားပြောနီးပါးအတူတူ၊သင်မူကား၊ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးများအတွက်ပေးဆောင်ဖို့အဝင်ပေါက်အခကြေးငွေ။ လာနှင့်ကြည့်ရှုပါ။ လာရောက်လည်ပတ်ပုဂ္ဂလိကအခန်းကြောင်းအရာတစ်ခုခုသည်သစ္စာဖောက်သည်ဖို့ပိုနှစ်သက်ဗီဒီယို။ လူသစ်နှင့်တွေ့ဆုံရန်၊စကားပြောခြင်း၊နှာ။ ရှာဖွေသင့်ရဲ့လျှို့ဝှက်အလိုဆန္ဒနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်သင့်ရဲ့အတွင်းစိတ်နတ်ဆိုးအတွက်ပုဂ္ဂလိကတိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုစကားပြော။ သင်သည်အဘယ်ကြောင့်စကားပြောလျက်ကိုရပ်တန့်နှင့်သရုပ်ဆောင်စတင်ရန်?”သင်လုံလောက်အခြားလူများအတွက်အခန်း? သင်တို့ကိုမလိုချင်ကြဘူး၏သမီးဖြစ်သူအခြားနားထောငျ? အဘယ်သူမျှမပြဿနာ! စတင်ပုဂ္ဂလိကဗီဒီယိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုစကားပြောမျက်နှာချင်းမိန်းကလေးနှင့်အတူသင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှု၏။ တစ်ခုချင်းစီဘက်မှာ (ငွေကြေး)အခကြေးငွေတရားစွဲဆိုလိမ့်မည်များအတွက်ပုဂ္ဂလိကစကားပြောဆိုချက်တွေကိုကိုလျော်ကြေးများအတွက်သုံးစွဲအချိန်အားဖြင့်မိန်းကလေးများ။ တစ်ချိန်ကသင်ကစတင်ပုဂ္ဂလိကစကားပြော၊သင်ပြုမှအခမဲ့သင်ချင်သမျှကိုအဆိုပါမိန်းကလေးလိမ့်မည်ထင်သည်။ အနားယူနှင့်ပျော်စရာရှိသည်! ကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးအများအလှအပမိန်းမတိုင်း၊ငါတို့သည်လည်းချစ်ကြဲျ။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူ၊ကျွန်တော်တို့ကိုပြသမိန်းကလေးရဲ့သတင်းအပေါ်မှာဆိုဒ်ကိုနေ့တိုင်း။ လူကြိုက်အများဆုံးတိုက်ရိုက်မြစ်ရေများကိုအထက်မျက်နှာပြင်၊သင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်အကြောင်းအရာကိုမည်သည့်အချိန်တွင်မ။ ကျွန်တော်ပေးဖို့အမျိုးသမီးအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာအနှံ့မှတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်အစီအစဉ်။ အကူအညီနိုင်ငံခြားသားများသက်သာခံစားရ၊ငါတို့သည်ဒေသချိန်းတွေ့ဗီဒီယိုမျိုးစုံသည္။ နောက်ဆုံးနွေရာသီမှာ၊အများအပြားမိန်းကလေးငယ်များအနေဖြင့်နိုင်ငံအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏ပလက်ဖောင်း။
များစွာသောငါ၏အဖောက်သည်သွားလာကြသူမိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်အတူရုရှားအတွက်သို့မဟုတ်ယူကရိန်းအပေါ်အချို့သောဆိုဒ်များခံရကြပြီျဖင့္ကနေမက်ဆေ့ခ်ျများအလွန်လှပပြီးအလွန်ငယ်ရွယ်ရုရှားမော်ဒယ်မိန်းကလေးများအတွက်အခမဲ့သို့မဟုတ်အခကြေးငွေ။ အသက်ကြီးလက်ခံရရှိအချစ်ကနေရုရှားမိန်းကလေးများဖြစ်ခဲ့သောမော်ဒယ်များအတွက်အနှစ်။ သင်တန်း၏၊လျှင်အစာပေးစာအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်၊ထိုအခါအဆုံးမှာရက်သတ္တပတ်ရုရှားမိန်းကလေးတစ်ဦးအဘို့တောင်းပိုက်ဆံများအတွက်ခရီးစဉ်၊နှင့်အဘယ်သူသည် ရခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါပြန်ဆပ်ဖို့အဘို့အသီးအသတင်းစကားမှအေဂျင်စီ၊ရုရှားမိန်းကလေးလိုမလာပဲလိုအားကစား။ ငါသည်သင်တို့ကိုတွေ့သောအခါဤဖောက်သည်များနှင့်အခါသူတို့မှာကြည့်ရှုသောအရည်အသွေးကိုစစ်မှန်သောအမျိုးသမီးများအပေါ်င္။ ယူကရိန်းအချို့သည်အလွန်စိတ်ပျက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ အမျိုးသမီးကိုစိတ်ဝင်စားသူငါ့ရဲ့အဆုံးမှာအီးမေးလ်ပါဘူးဖို့ဟန်တူမေတ္တာ၌ပြိုလဲနှင့်အခြားဆိုက်များပေါ်တွင်၊မိန်းကလေးများနှင့်အတူမေတ္တာ၌ကျဆင်း၊ျဖင့္၊နီးပါးချက်ချင်း၊ကျွန်တော်အပြစ်တင်အခြားသူများဤဖောက်သည်များများလုံးဝပျောက်ဆုံးနေသောထိတွေ့နှင့်အတူအဖြစ်မှန်ကြောင့်ဂျင်မွှန်းနှင့်အတူလိမ်လည်မှုများနှင့်လိမ်လည်နေကြောင်းမွှန်းနှင့်အတူချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များအခမဲ့။ တကယ်အများကြီးအဆင်းလှသောအမျိုးသမီးနှင့်ရုရှားနှင့်ယူကရိန်း၊ဒါပေမယ့်မှားယွင်းသောဤနိုင်ငံတို့ကိုထိပ်တန်းမော်ဒယ်အဆင်သင့်ဖြစ်ကြောင်းအကျဆုံးနှင့်အတူမေတ္တာ၌ပထမဦးဆုံး လူရုရှားအတွက်သို့မဟုတ်ယူကရိန်းလွယ်ကူသောလက်ခံရန်အသက်အရွယ်ကွာခြားချက်၊တခါတရံပို၊ဒါပေမယ့်မအတွက်အနှစ်။ အဘယ်ကြောင့်တစ်ဦးကျိုးနွံအမျိုးသမီးကယူနက်နှင့်သွားဖို့အဆုံး၏အချို့သတင်းလက်ခံရရှိကနေ၏အစိတ်အပိုင်းအဖြစ်အပျက်သွားတဲ့နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်အတူလူသူမချစ်တော်မူ၏ မမြင်ဖူးခင်က? တွေ့သောသူတို့သည်အဖြေမှန်သူဖြစ်လာတစ်ခုနှင့်တစ်ခုတော့ရှိတယ်၊တွေ့အများကြီးအဆင်းလှသောအမျိုးသမီးများယူကရိန်းနှင့်အောင်မြင်မှုနှုန်းကဒီဆိုက်တွင်၊အဘို့အထိုကဲ့သို့သောယောက်ျားသည်
ဤကျပန်းနှင့်အတူကြောင် မှန်မိန်းကလေးအားလုံးမှကမ္ဘာအနှံ့! သင်ငြီးငွေ့၏ချက်တင်အခန်းပေါင်းကြောင်းဖြင့်ပြေးခြင်းအားဖြင့်အမျိုးသားများ? ဒါကြောင့်အကယ်။၊ထို့နောက်သင်လက်ျာအရပ်မှလာ! စံုေပါချိတ်ဆက်နှင့်အတူအမျိုးသမီး၊ဒါကြောင့်သင်ရှိသည်ဘယ်တော့မှလိမ့်မည်ကြည့်ဖို့ယောက်ျားအပေါ်အဒီဗားရှင်းကြောင်၏၊သောဖန်တီးခဲ့၊အထူးသဖြင့်ချင်သူလူများအတွက်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့မှန်။ ဒါကြောင့်ဖြစ်စေခြင်းငှါဖို့ပိုပြီးလွယ်ကူပြေမျိုးသမီးများအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်၊ငါတို့ဖန်တီးခဲ့ကြစာမျက်နှာတစ်ခုနှင့်အတူအထောက်အကူဖြစ်စေအကြံပေးချက်များသင်ကူညီ၊အခန္းမိန်းကလေးစကားပြောသည်မိန်းကလေးများကိုအသုံးပြုရန်လွယ်ကူပြီးအခမဲ့၊အမြန်ဆုံးသကဲ့သို့သင်တို့ကိုဒေါင်းလုပ်ဆိုဒ်၊ပန္းအသုံးပြုသူကိုချက်ချင်းပေါ်လာ။ သင်ကမကြိုက်ဘူးလျှင်လူတစ်ဦးအနေနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်င်၊ကိုယ့်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ ကိုချက်တင်နှင့်အသုံးပြုမှုများ၏အဆိုဒ်၊သင်သေချာအောင်ရန်လိုအပ်ပါတယ်သင်ရှိသည်ပိုပြီးအနှစ်၊အခမဲ့သောကြာထက်လျော့နည်းတစ်မိနစ်။ ပြီးတာနဲ့အတည်ပြုသင့်အသက်အရွယ်၊သင်သည်ချက်တင်စကားပြောနိုင်မှာထောင်ပေါင်းများစွာ၏နှင့်အတူအဘယ်သူသည်မိန်းကလေးငယ်များတိုက်ရိုက်အင်တာနက်ပေါ်မှာ။ သငျသညျလညျးရနိုငျအသေးစိတ်အချက်ကအသက်အရွယ်သည့္စနစ္ နှင့်စတင်သုံးစွဲဖို့ဘယ်လို။ သင်စွဲဖြစ်လာသောကြောင့်ကြောင်မိန်းကလေးပျော်စရာကောင်းသည်၊အခမဲ့၊နှင့်ကမ်းလှမ်းမှု၏နာရီပေါင်းများစွာချက်တင်နှင့်အတူအပြန်အလှန်ဗီဒီယိုများအတွက်အလုပ်လုပ်သောအမှန်တကယ်အချိန်နှင့်မပါဘဲဖြစ်လာခဲ့သည်။ ပေါင်းစပ်ပျော်စရာနှင့်ထွက်ကြိုးစား။ ကျနော်တို့သေချာပြန်လာကြလိမ့်မည်နေ့တိုင်းအဘို့တစ်ဦးဆေးထိုး၏အရေးယူ! ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်အချက်အလက်များပါဝင်သည်၊←လင့်များ၊ပုံရိပ်တွေနှင့်ဗီဒီယိုများဆံ့ကြောင်းလိင်ကတိကျပြတ်သားပစ္စည်း(စုပေါင်း၊”ဝက္ဆိုက္”)။ ဆက်လက်မပါဘူးဆိုရင်:(ကျွန်တော်)သင်ကအောက်မှာအနည်းဆုံးအသက်အရွယ်သို့မဟုတ်အသက်အရွယ်အများစုအတွက်ပြုလုပ်ထားတဲ့အတွက်သင်အမြင်ဒါမှမဟုတ်အမြင်လိင်ကတိကျပြတ်သားပစ္စည်း၊အဘယ်သည်သာ။(“အသက်အရွယ်အများစုသည်”)၊(ဒုတိယ)ပစ္စည်းအစိတ်အနှောင့်၊(ဂ)ကြည့်ရှုလိင်ကတိကျပြတ်သားပစ္စည်းကိုမတွက်ဥပဒေကြောင်းအရအသိုင်းအတွက်ကြည့်ရှု။ အားရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်ဝင်ရောက်ဖို့ကိုယ် သင်အတည်ပြုအောက်သိပ္ျနှင့်အောက်သက်သေခံမှု၏ပြစ်ဒဏ်အောက်မှာခေါင်းစဉ်အတွင်းသတ်မှတ်နှင့်အခြားဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအားလုံးအောက်ပါထုတ်ပြန်ချက်ၿပီးမှန်ကန်သော:ဒီဆိုက်တက်ကြွစွာလဲႊေျနှင့်အတူဥပဒေကြောင်းအရကိုယ်စားလှယ်အားလုံးကိစ္စများတွင်အသုံးပြုမှုများအတွက်ဝန်ဆောင်မှု၊အထူးသဖြင့်သည့်အခါအဆိုပါဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်လူပုဂ္ဂိုလ်များရှိသောသူ၏အသက်အရွယ်ရောက်ရှိအများစု။
ဓါန္မွလွိဳက္လွဲစြာၾကိဳကြောင်။ ကောင်းစွာ! မီချိတ်ဆက်နိုင်သည်၊ရမည်ဖြစ်မှတ်ပုံတင်ထား။ ယခုပေါ်တွင်နှိပ်ပါကချိတ်ဆက်။ ဓါန္မွလွိဳက္လွဲစြာၾကိဳကြောင်။ ဖြစ်! မီချိတ်ဆက်နိုင်သည်၊ရမည်ဖြစ်မှတ်ပုံတင်ထား။ ယခုပေါ်တွင်နှိပ်ပါကချိတ်ဆက်။ မှတ်ပုံတင်သို့မဟုတ်အဘို့အတက်လက်မှတ်ထိုးအခမဲ့ချက်တင်။ ကောင်းစွာ၊တစ်ဘယ်လ်ဂျီချိန်းတွေ့ဆိုက်အခမဲ့စကားပြောခန်း၊သူငယ်ချင်းများသို့မဟုတ်တွေ့ဆုံရန်တစ်ခုတည်းအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအတွက်ဘယ်လ်ဂျီယံ။ အလေးအနက်နှင့်အရည်အသွေးမြင့်မား။ ချိန်းတွေ့၊ရင်းနှီးဖော်ရွေသို့မဟုတ်ချစ်? သင်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်! တကယ့်လူမှုကွန်ယက်နှင့်အတူများစွာသောဝန်ဆောင်မှုများကို:ချက်တင်၊ကမ်၊ဓာတ်ပုံတွေ၊ဗီဒီယို၊ရေဒီယို၊ဖိုရမ္၊အုပ်စုများ၊ဘလော့ဂ်များ၊အများပြည်သူသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂလိကနှင့်အများကြီးပို! ဒီတရားဝင်ဖြစ်လျှင်သင်တို့အပေါ်တွင်နှိပ်ပါအတွက်မှတ်ပုံတင်ပြီးအနိမ့်ညာဘက်ထောင့်။ တစ်ဦးသာယာသောလေထုနှင့်ကစားရန်ပျော်စရာနှင့်အတူ
ဓါန္မွလွိဳက္လွဲစြာၾကိဳကြောင်။ ကောင်းစွာ! မီချိတ်ဆက်နိုင်သည်၊ရမည်ဖြစ်မှတ်ပုံတင်ထား။ ယခုပေါ်တွင်နှိပ်ပါကချိတ်ဆက်။ ဓါန္မွလွိဳက္လွဲစြာၾကိဳကြောင်။ ဖြစ်! မီချိတ်ဆက်နိုင်သည်၊ရမည်ဖြစ်မှတ်ပုံတင်ထား။ ယခုပေါ်တွင်နှိပ်ပါကချိတ်ဆက်။ အဘယ်လ်ဂျီချိန်းတွေ့ဆိုက်ဖြစ်ပါတယ်လုံးဝအခမဲ့၊အလေးအနက်နှင့်န့်အသတ်သည်တစ်ဦးတစ်ယောက်၊အမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသားများ၏ဘယ္လ္ဂ်ီယံ! ချိန်းတွေ့၊ရင်းနှီးဖော်ရွေသို့မဟုတ်ချစ်? သင်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်! တွန့်ဆုတ်မထားပါနဲ့ပူးပေါင်းဖို့၊မျှဝေသင့်ရဲ့ဓါတ်ပုံများနှင့်မက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်အတူအခြားအသုံးပြုသူများနှင့်အတူစကားပြော။ လတ်ဆတ်သောနှင့်ပျော်စရာ၏လေထု! ကျွန်တော်နှင့်တွေ့ဆုံရန်တစ်ဦးကောင်းတဲ့ကောင်လေးအဘယ်သူသည်သိတော်မူ၏တန်ဖိုးအမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုငါ့အဘို့အသက်အရွယ်အရေးမပါဘူး အဘယ်သူမျှမနေပါစေ၊ငါလာမှကျွန်တော့်အဖေကပြင်သစ်ကနေဘယ်လ်ဂျီယံမိခင်ကျေးဇူးအင္ဂ်င္ပါငါဖြစ်ချင်ကြောင်းသတိပြုပါ ၊ငါပဲရောက်ရှိဒီဆိုက်တွင်ငါသည်အသက်ရှင်၏မြောက်ဘက်တွင်ပြင်သစ်နိုင်ငံကိုသွားတဲ့အစည်းအဝေးလ်ဂျီယံအတွက်ပါအလေးအနက်နှင့်ရင်းမှန်မိန်းကလေး၊ငါရှာဖွေနေများအတွက်ကဲ့သို့တူညီသော၊လူတိုင်းအတွက်မဟုတ်။ ပြင်သစ်သည်အထူးသဖြင့်အရုပ်ဆိုး။ မပြင်သစ်နိုင်ငံမှ၊အပြင်အပြင်ရေရှည်ကေလး။ စေခံ၊သင်မည်သို့မာကုအကြေးခွံ။ အသက်ဘယ်လောက်သင်?”ဒါကြောင့်သင်မည်သို့အဓိပ္ပါယ်လူ? ငါအံအားသင့်ခဲ့ပါတယ်။ ချိန်းတွေ့၊ရင်းနှီးဖော်ရွေသို့မဟုတ်ချစ်? နှာ၊ပရောကြားတစ်ဦးတစ်ယောက်၊သို့မဟုတ်ရုံနှင့်အတူစကားပြော။ အတူပျော်အပါး! ပွင့်လင်းမှအားလုံးပရိုဖိုင်းကျော်အနှစ်:အမျိုးသမီး၊အမျိုးသား၊၊လိင်နှစ်မျိုးစလုံးရှိ၊သက်ကြီးရွယ်အိုစုံတွဲတစ်တွဲ။ ဒါဟာကမ်းလှမ်းမြောက်မြားစွာဝန်ဆောင်မှုချောမွေ့ရန်အဆက်အသွယ်နဲ့အစည်းအဝေး။ သင်၏ဓါတ်ပုံများကိုမျှဝေ၊ရှုခင်းများ၊အစည်းအဝေးနေရာများသည်တစ်ဦးတစ်ယောက်သို့မဟုတ်မိတ်ဆွေများအားလုံးအတွက်တိုင်းဒေသကြီးနှင့်မြို့၏အဘယ်လ်ဂျီယံအတွက်၊၊၊မွန်၊ဂျ၊၊၊ ဘရပ်ဆဲလ်၊၊၊၊။ အရာအားလုံးကိုဒီနေရာမှာအခမဲ့! နိယာမရိုးရှင်းသော:သင်ရှိသည်နှင့်တပြိုင်နက်မှတ်ပုံတင်ထား၊သင်အသုံးပြုမှုဆိုက်နှင့်အဆက်အသွယ်အခြားအဖွဲ့ဝင်များ။ သင်ရှိသည်စစ်မှန်သောပရိုဖိုင်ရုပ်ပုံအတွက်မှန်ကန်သောပုံစံကို။ သစ္စာနှင့်တက်ကြွသောအဖွဲ့ဝင်နိုင်ပါသည်အကျိုးကိုခံရနှင့်အတူတစ်ဦးသို့မဟုတ်ပိုပြီးဆုလာဘ်? အပေါ်ပရိုဖိုင်ဓာတ်ပုံ။ ရှိပါတယ်အများဆုံးအရေအကြယ်ပွ:ကြယ်ပွင့်အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နှင့်စဉ်းစားနေကြတယ်အခွင့်ထူးခံ၊အရေး၊နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသော။ အကောင်းဆုံးသူများဆီမှာလေးခုရှိနှင့်ကြသော! အချို့ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်သာရရှိနိုင်ရန်အဖွဲ့ဝင်များ၏အ ။ လက္တြဲများတွင်၊အတက်အလေးကြယ်ပွင့်လှေကား! ကျွန်တော်တို့ရဲ့မူဝါဒကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ရိုးရှင်းတဲ့:အကြှနျုပျတို့သညျအဘယ်သူမျှမပြောဖို့ပေးဆောင်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ! ကျနော်တို့အစဉ်အမြဲပူဇော်အားလုံးသည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများအတွက်အခမဲ့! စားႏိုင္မည္။ ခိကတည်းကတည်ရှိလာခဲ့သည်တော့ပြီ၊ကျနော်တို့တစ်များရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ်။ အလေးအနက်နှင့်အရည်အသွေးမြင့်မား။ အရာအားလုံးအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်၊အဘယ်သူမျှမဝှကျထားကုန်ကျစရိတ်။ အသုံးပြုသူများပေးဆောင်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူးဘို့အဘယ်အရာကိုအသုံးပြု။ ကျွန်တော်တို့ ကျွန်တော်တို့ဘဏ္ဍာရေးနှင့်မိမိကိုယ်ကိုမိမိနှင့်အတူကြော်ငြာနှင့်သေချာအောင်ကျနော်တို့စိုးရိမ်ပူပန်စရာမလိုအသုံးပြုသူများနှင့်ပတ်သက်။ အသစ်သောရွေးချယ်မှုများဖြစ်ကြ၏မှန်မှန်ပူဇော်တိုးတက်လာဖို့အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံနှင့်အောင်ကတောင်ပိုပြီးပျော်စရာ၊အစဉ်အမြဲအခမဲ့! ကျနော်တို့အခက်ခဲအလုပ်လုပ်ဖို့ရှိသည်ခေတ်နှင့်ထိရောက်သော။ ဆန္ဒအလျောက်အိပ္ခပေးကောင်းတစ်ဦးလေထုအတွက်အထွေထွေ။ လှုံ့ဆော်ချင်တဲ့သူများလူမျိုး၏အစိတ်အပိုင်းအဖွဲ့ကိုကြိုဆိုကြသည်။ ပြောရပ်တန့်ဘို့အအတုပရိုဖိုင်း! အဆိုပါအဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်နေသောအလွှာနှင့်အခြားခြိမ်းခြောက်မှုများ။ ကျနော်တို့အကျယ်မှီခိုအပေါ်အသံုးျပဳသူမ်ား၏တုန့်ပြန်သောအခါအားမရကြော်ငြာအင်တာနက်ပေါ်မှာ။ လှုပ်ရှားစေရန်အတူတကွဤအရပ်ဌာနအခမဲ့၊သန့်ရှင်းသော၊နွေးထွေးသောဖိတ်ခေါ်၊ဆုံးနဲ့အရေး၊အမှန်တကယ်စစ်မှန်သောနေရာ! ကျနော်တို့အားလုံးကိုမလှုပ်မရှားအကောင့်အသစ်များ၏အောင်အခန်းများသူလူများအတွက်သုံးစွဲဖို့ဆက်လက်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ကျေးဇူးပြု။? ဒီတော့ဖို့အခမဲ့ခံစားရကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျကစားႏိုင္မည္။ ဖြစ်သင်သည်သင်၏ဧရိယာ၌။ အတူတူကျနော်တို့ဒီ ဘယ်လ်ဂျီချက်တင်အတွက်အကောင်းဆုံးအခမဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်လ်ဂျီယံအတွက်
အခမဲ့အွန်လိုင်းချက်တင်နှင့်အတူတစ်ကမ်မပါဘဲမှတ်ပုံတင်များအတွက်သားသမီးရှိသမျှကျော်ကနေ။ အတွက်လက်မှတ်ထိုးပြင်သစ်မီးေချက်တင်နှင့်အတူကမ်ချတ်အကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူ! ထူးခြားတဲ့! သင်သည်ချက်တင်စကားပြောနိုင်နှင့်အတူအမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးရှိသမျှကျော်ကနေပြင်သစ်နှင့်ပြင်သစ်စကားပြောနိုင်ငံများ။ ကြောင်နှင့်တိုက်ရိုက်လိုင်းထဲမှာဝင်စားခ်င္းအုပ်စုချက်တင်၊အဓိက(အစည်းအဝေး၊ကြန္ပ်ဴတာစ်၊အခမဲ့၊၊ဂီတ၊ဗီဒီယို၊ဂိမ္း၊ဥာဏ္စမ္း၊တ္ထု၊ခြစ်၊အန္း၊ပန်းသီး၊လူ၊ကမ်။) ဧရိယာကနေမှဧရိယာ(ပဲရစ်၊عینک آفتابی زنانه ليون၊၊ခ်၊၊၊၊၊ပြင်းထန်၊ခ်၊၊عینک آفتابی زنانه ليون၊၊၊၊ပြင်သစ်၊၊၊၊-၊သာျ၊နန်၊၊၊စိန့်-သံုးႏိုင္သူမ်ား၊၊ညည်၊ပြင်သစ်တွင်၊၊ပုပ္ပါး၊၊၊ဗာ၊၊၊အမွားမ်ား-ဆန့်ကျင်ဘက်ပီး၊ေ-ဆန့်ကျင်ဘက်ပီး၊အရှေ့၊အနောက်၊ တောင်၊အလယ်ဗဟို၊-ကော့။) အားဖြင့်နိုင်ငံ(လ်ဂျီယံ၊ဆွစ်ဇာလန်၊အယ္လ္ဂ်ီးရီးယား၊မော်ရိုကိုနှင့်တူနီးရွား)။ ယခုသင်ဆက်သွယ်နိုင်အများအပြားဧည့်မှာပြပွဲအခမဲ့ပါဘဲ။ သင်ချင်တယ်ဆိုရင်သင်သွားကြဖို့နောက်ထပ်၊သင်စတင်နိုင်ပါသည်၊အတဲ့ဆွေးနွေးချက်အတွက်။ သာဗေကန့်သတ်ရန်ဖြစ်ပါသည်လးလူတိုင်းနှင့်အာကာသများအတွက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနိုင် ကြွေးကြော်ထွက်သင့်နေ၊စကားပြောနှင့်အတူရေဒီယိုအတွက်ပျော်စရာ
ချည်းနှီးသောကြောင်ကိုက်ချွန်ထက်အခန္းလူတန်းစားစမ်းနေကြတယ်သောသူတို့အဘို့စာရေးအမျိုးအစားကနေဒီအသစ်အ-အ-အ-အနုပညာဆက်သွယ်ရေး။ သင်ရှိပါကတစ်ဦးကမ်မိုက်။ တစ်စုံတစ်ဦးကကြိုးစားနိုင်ပါသည်ရှာတွေ့ဖို့သူတို့ကိုမိစုတော်မူ၏။
အခမဲ့ချက်တင်အခန်းပေါင်း၊ၾကာင္း၊အခမဲ့ဆွစ်ဇာလန်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များထွက်စစ်ဆေးအခမဲ့ဂိမ်းများ။ မှတ်ပုံတင်ခြင်းတာဝန်ခံအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်ယုံကြည်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ရုရှားချိန်းတွေ့န်ဆောင်မှုညွှန်ပြပါလိမ့်မယ်အလုပ္၏။ ကိုးကား ဂျီးချိန်းတွေ့အခမဲ့။ တွေ့ဆုံဆယ်ကျော်သက်ကနေတဆင့်ကမ်၊အခမဲ့ပါဘဲ။ အခမဲ့စကားပြောလိင်တူလိင် ဗီဒီယိုများလိင်ယောဟန်လိင်တူညီေဗီဒီယိုများလိင်နန်းလျာညီေဗီဒီယိုများကိုးကားလိင်တူစပိန်လိင်တူစြာ။ ေများသည်။ ကိုးလ် လိုတဲ့ရင်ခုန်စရာရင်ဆိုင်အတွက်အလေးအနက်ဖြစ်သည်။ ဝဘ်ဆိုဒ်များအတွက်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေးပြည်:ပြင်သစ်နိုင်ငံက။ နှစ်ပေါင်းများစွာအဘို့ငါရှာဖွေနေခဲ့ကြအမျိုးသားများအဘို့အချိန်းတွေ့အလေးအနက်ထွက်စစ်ဆေးအခမဲ့စကားပြောမပါဘဲမှတ်ပုံတင်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များအိုများအတွက်အခမဲ့ ။ ခ်ိတ္ဆြဲရန္စာမရှိဘဲအစည်းအဝေးကိုခုနစ်ရွှံ့ကျွန်း:မႏၲေလးမင်္ဂလာဆောင်ကြန္ရက္ကိုရဲ့ဇလဲလှယ်ပုံပြင်များကြည့်ဖို့ဂိမ်းအခမဲ့။ မှတ်ပုံတင်ခြင်းတာဝန်ခံအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။ ယူကရိန်းအတွက်ချစ်ကြည်ရေး၊ချိန်းတွေ့အလေးအနက်ဆက်ဆံရေးသို့မဟုတ်၊သင်ရလိမ့်မည်။ တွေ့အနီးကပ်မကြာမီသူတို့သဘောပေါက်သူမကြုံတွေ့။ သေချာအောင်အနက်ဖော်အဘို့ရှာဖွေနေအမျိုးသမီးတစ်ဦး။ ရွားချိန်းတွေ့ဆိုဒ်မပါဘဲအခမဲ့မှတ်ပုံတင်အပေါ်။ အခမဲ့ချက်တင်ကွန်ရက်စာမျက်နှာများအတွက်လှပသောဆယ်ကျော်သက်ဗျာ ပြင်သစ် ချင်ပါဘူးဆိုပြီး။ ငါ့ကို ငါလိုကစားနံနက်ယံ၌။ အခမဲ့အလေးအနက်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်မပါဘဲမှတ်ပုံတင်၊သံုးေမိန်းကလေး:အဖြူအပီခ်-ဟာသ-ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်မပါဘဲအခမဲ့။
သိပ္ပံပညာ၊ဘာသာရေးနှင့်အ”ခေါင်းစဉ်၏ဒီဗီဒီယိုများအတွက်၎င်း၏ပထမဦးဆုံး။ ငါဖျက်ဒါကြောင့်လအနည်းငယ်အကြာ! ငါပဲ မှဖယ်ရှား၏။ အခုကြ်န္ေတာ္တို့သိတာကေမြေမဂ္ဂဇင်းနှင့်မြန်မာ့အတူဆက်ဆံရာတွင်အတွက်၊လူတိုင်းရဲ့တာဝန်ပညာအကြောင်းကိုလူတို့၏မကောင်းသောအ၊အဲဒီ ကှ! ေပြီမဟုတ်သူကိုလူတွေကစောင့်ကြည့်၊ဒါကြောင့်အရေးကြီးသောလူသားအားလုံးအဖို့အချိန်နားလည်သဘောပေါက်ကျေးဇူးပြုပြီး! ပဲရစ် အခမဲ့အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့။ ကိုးကားအခမဲ့ချိန်းတွေ့နှင့်ၾကာင္း ဒါ့အပြင်၊သငျသညျအောက်မေ့ရမည်ကိုလက်ခံ။ အဆိုပါဆန့်ကျင်အကြမ်းဖက်ဌာန၏ပြင်သစ်နိုင်ငံပါေကးခဲ့သက္သြင္းအင်္ဂါနေ့ကအလယ်၌လူအစုအဝေး၏မဲေ။ အချုပ်ကိုင်ထား၏အကြမ်းဖက်ခြိမ်းခြောက်မှုမပါဘဲဒီေဂ်ထည့်သွင်းအတွက်အများပြည်သူစာရင်း။ ရိုးရှင်းတဲ့ ကိုနှိပ်ပါ၊အတွင်းသူတို့ထိ၊အခမဲ့၊ကျွန်ုပ်တို့ကြောင်။ ၎င်း၏အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြအင်တာနက်ပေါ်မှာ။ အစာရှောင်ခြင်းနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်မှတ်ပုံတင်နိုင်ပါတယ်။ အခမဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်းလွယ်ကူချင်တယ်ချိန်းတွေ့ဆိုက်အတွက်။ အခမဲ့ဗီဒီယိုစကားပြောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲအခမဲ့အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ချက်တင်ကင်မရာကိုချက်တင်နှင့်အတူအခမဲ့ကမ်၊ချက်တင်ကမ် စိုးရ။ အရည်အသွေးအခမဲ့စကားပြောမပါဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုမည်သည့်ပြဿနာမျှမရှိဘဲလူတို့နှင့်အတူ။ အခမဲ့ချိန်းတွေ့ပြချိန်းတွေ့အွန်လိုင်းကမ်ဘောချိန်းတွေ့ဆိုက်အတွက် နှင့်အချိန်ကာလ၊အခမဲ့ချိန်းတွေ့ကြော်ငြာနှင့်လာရောက်လည်ပတ်အားဖြင့်အမျိုးသား၊အတူ၊အဘို့အရှာဖွေနေအစီအစဉ်သို့မဟုတ်မေတ္တာမပါဘဲကွင်း၊ဝေး။ သူတို့ကအွန်လိုင်း။ နောက်ဆုံးအချိန်ခဲ့သည်။ အဘို့အတက်လက်မှတ်ထိုးသင်တစ်ဦးချိန်းတွေ့ဆိုက်၊ဦးကြိုပြုလိင်ချက်တင်နှင့်အတူကျောင်းသားကျောင်းသူများမှစာပိုဒ္တို-ပြင်သစ်နှင့် ချိန်းတွေ့ခြင်းသည်လိင်အခမဲ့ပါဘဲ။ သို့မဟုတ်သူအမျိုးသမီးလိုအနားယူသို့မဟုတ်ပျော်စရာရှိသည်မှာသဟဇာတနှင့်အတူ။ ဖော်လည်းမကျေနပ်ကြော ကမ်းလှမ်း၊အခမဲ့ဝက်ဘ်ဘ္ဆုုိဒ္တူဆာ့ဖ္ဝဲလ္၊အခဲ့ပါတယ်၊ကင္ဆာ၊အာကာသရှိသည်ဆာ့ဖ္ဝဲလ္ နှင့်ခဲ့ပါတယ်ထောက်ခံမှုမရှိဘဲကန့်သတ်၊အခမဲ့ဒေါင်းလုပ်အပြည့်အဝရုပ်ရှင်၊တီဗီစီးရီး၊စာအုပ်တွေ၊ပြပွဲနဲ့ပိုပြီး၊ဖိုင်များကို၊တာဘို၊စသည်တို့ကို။ သို့မဟုတ် နှင့်စမ်းချောင်းအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ။ အခမဲ့တောင်ချိန်းတွေ့ဘာကိုချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များသင်ဖတ်ချင်လုပ်ငန်းများတောင်စျေးပေါအခမဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်အကြီးတန်း ပြုသကဲ့သို့အများကြီး။ သို့သော်၊ဤသည်မှာတစ်ဦးချိန်းတွေ့ဆိုဒ်ဖြစ်ပါသည်မပါဘဲမှတ်ပုံတင်၊အလေးအနက်ချိန်းတွေ့ဆိုက်။ မက်ငယ္ခ်င္းချိန်းတွေ့ဆိုက်၊တကယ်တော့၊သည်မှာတစ်ဦးချိန်းတွေ့ဆိုဒ်ဖြစ်ပါသည်၊အွန်လိုင်းမှချိန်းတွေ့ဝန်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့်အခမဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုက်ဝန်ဆောင်မှု။ ဘယ်လိုမှရရန် မပါဘဲမှတ်ပုံတင်အတွက်အရှေ့နှင့်တွေ့ဆုံရန်အနောက်ပြင်သစ်၌ချက်တင်နှင့်အတူဗီဒီယိုကင္မရာ။ ဒီကမ်ချတ်ချိန်းတွေ့ဆိုက်အတွက်တစ်ဦးတစ်သူတစ်ဦးဦးနှင့်တွေ့ဆုံချင်တယ်။ အခမဲ့အွန်လိုင်းချက်တင်မပါဘဲမှတ်ပုံတင်နှင့်အတူအဖွဲ့ဝင်များ၏ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ၊လူငယ်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး၊ ချိန်းတွေ့ဆိုက်အခမဲ့ ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းမရှိဘဲကွန်ယက်ချိန်းတွေ့ဆိုက်ရှာလုံးဝအခမဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်၏အရှန်-။ ချိန်းတွေ့မပါဘဲပြင်သစ်ထိ။ အစုံဖတ်ရန်အကြောင်းအလေးအနက်အခမဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ ရှိသည်နည်းလမ်းတွေကြောင်းသင်တို့အဘို့အမှန်သည်။ နိမ့်ဆုံးမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊အရာခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ အားလုံးအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ၊ဒါပေမယ့်ညာဘက်မခံစားရပါဘူး။ သည်ကောင်းရှေ့တော်၌ပါဝင်ပတ်သက်ရင့္လက္တြဲသို့မဟုတ်အမူ၊စဉ်းစားခြင်းမရှိဘဲနှစ်ကြိမ်မှကြွလာသောအခါအိမ်စုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရက်စွဲများအတွက်ဘယ်လ်ဂျီယံ။ အစီအတိုအစီအစဉ်ကိုတို ခမဲ့ဆိုးကြော်ငြာမပါဘဲ။ သင်ယူအွန်လိုင်းကအကောင်းဆုံးဝက်ဘ်ဆိုက်မှစကားပြောအင်္ဂလိပ်အတွက်အွန်လိုင်းအခမဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်းသို့မဟုတ်လုပ်နိုင်တဲ့အသစ်နှင့်အလေးအနက်အစည်းအဝေးနှင့်အဘယ်ကြောင့်မဖြစ်။
မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံတကာချက်တင်အပေါင်းတို့ကိုသူတို့အဘို့ရှာဖွေနေသည်သူ၏အခြား။။။။။ သင်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်တစ်ခုတည်းကောင်လေးနှင့်သင်စိတ်ဝင်စားဖို့စကားပြောအစည်းအဝေးနှင့်အတူမိန်းကလေးများ။ အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေရှည်အတွေ့အကြုံပြသခဲ့သည်၊အသုံးပြုသူများကျွန်ုပ်တို့၏အရင်းအမြစ်ရှိသည်အတူမေတ္တာ၌ပြိုလဲအသီးအသီးအခြားအကြိမ်ပေါင်းများစွာနဲ့ဖန်တီး။ ဒီနိုင်ပါတယ်၊နှင့်သင်အပျော်သောသူလိမ့်မည်အလွယ်တကူလှည့်သွင်ဆက်သွယ်ရေးသို့စစ်မှန်သောပျော်ရွှင်မှု။ သတင်းစကားအကြောင်းအရင်းအမြစ်များမှာအလယ်အလတ်နှင့်ငြင်းပယ်ခံရရှိပါတယ်လျှင်ညစ်ညမ်းသောသို့မဟုတ်အကြမ်းဖက်အချက်အလက်။ သေချာပါစေမှဆက်သွယ်ပြောဆို။
“ပရိသတ်အတွက်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း” “ချိန်းတွေ့ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းအတွက်”ချိန်းတွေ့ဆိုက်! ပြီးသားကိုယနေ့အပေါ်”တွင်ချိန်းတွေ့ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း”ချိန်းတွေ့ဆိုက်၊ငါ့ဆိုက်ခွင့်ပြုလူတိုင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်အသုံးပြုခြင်းအကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုကိုချိန်းတွေ့ခြင်းနှင့်စကားပြောအတွက်ခေတ်သစ်အွန်လိုင်းဗားရှင်း။ ဒါကြောင့်မှတ်သားထိုက်သည်ကအပေါ်ဆိုက်”ချိန်းတွေ့အတွက်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း”၊ဂိမ်းအတွက်ချိန်းတွေ့နှင့်ဆက်သွယ်ရေးကိုလူတိုင်းအခမဲ့ပါဘဲ။ ၏အားသာချက်ကိုယူအပြည့်အဝလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း၏ဆိုက်ရဲ့”ချိန်းတွေ့ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းအတွက်”အပိုင်းမှာငါ့ချိန်းတွေ့နှင့်ချက်တင်စာမျက်နှာနှင့်ဆက်သွယ်ငြိမ်ဝပ်နှင့်အတူ! ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့ရှာကြသည်:ချိန်းတွေ့၊ချိန်းတွေ့ဆိုက်၊ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်မပါဘဲမှတ်ပုံတင်၊ချိန်းတွေ့နှင့်က်ပ္၊ချိန်းတွေ့ဆိုက်၊ငါ့ဆိုက်ချိန်းတွေ့နှင့်လူမှုဂိမ်းများ။
ရွေးချယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရွယ်ရောက်ချိန်းတွေ့ဆိုက်နှင့်ရရန်အလွန်ကြီးစွာသောရလဒ်။ တွေ့ဆုံရုံနဲ့အလွယ်တကူအောင်ခန့်နှင့်တွေ့ဆုံနှင့်အတူအရွယ်ရောက်ပြီး၊အတွေ့အကြုံများ၏အမြင့်ဆုံးတောက်ပနှင့်ထူးခြားတဲ့စိတ်ခံစားမှုနှင့်အတူတစ်ချိန်တည်းမှာအချိန်၌အကောင်းတစ်ဦးစိတ်ဓါတ်များ။ ရွေးချယ်အခမဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်အခုနှင့်အလုပ်သင့်အိပ်မက်တွေနှင့်စိတ်ကူးယဉ်စစ်မှန်တဲ့လာ! အရည်အသွေးမြင့်မားပြီးလုံခြုံတဲ့အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့န်ဆောင်မှုများအတွက်လူအများအပြားပါဝင်။ လူတိုင်းရရှိအဘယ်အရာကိုသူတို့ရှာတွေ့ချင်။ သင်တွေ့လိမ့်မည်မဟုတ်ပါသာအရည်အပါဝင်၊ဒါပေမယ့်လည်းအချက်အလက်အကြောင်းအဘို့အချိန်းတွေ့အရွယ်ရောက်သူ။ ကျွန်တော်တို့ကိုချိတ်ဆက်အရွယ်ရောက်နေသောချိန်းတွေ့နှင့်ချိန်းတွေ့ခြင်းအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်
© 2020 ဗီဒီယိုက ချက်တင် နော်ဝေ